ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရုရှားသမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး စတဲ့ ဧပြီလ ၂၇ ရက် မနက်ခင်း သိသင့်တဲ့ သတင်းတွေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရုရှားသမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် တ...
27 เม.ย. 2562 - 11:28 น.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင်
(၁) နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရုရှားသမ္မတ သီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တရုတ်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင်နဲ့ ဧပြီ ၂၆ ရက် က ဘေဂျင်းမြို့မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာ - ရုရှား နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ကော်မရှင်ကနေ တဆင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ပိုမိုမြှင့်တင်ဖို့ ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆက်သွယ်ရေး၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကဏ္ဍ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကဏ္ဍတွေမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရပ်ဝန်းနဲ့ ပိုးလမ်းမ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဖိုရမ်ကို တက်ရောက်ဖို့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့ကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရပြီ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီရဲ့ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ခွင့်ပြုချက်ကို ဧပြီ ၂၅ ရက်စွဲနဲ့ ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်းက သူရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့၊ နိုင်ငံသားများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝ လုံခြုံမှုနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ရရှိစေဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဧပြီ ၂၆ ရက် မှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကောင်းကျိုးလိုလား ကောင်းကျိုးဆောင်လိုသူ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပါဝင်မှုနဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို မျှော်လင့်ကြိုဆိုတယ်လို့ သူရဦးရွှေမန်းက ရေးသားထားပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကို ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ဧပြီ ၄ ရက်တွင် ပါတီတည်ထောင်ခွင့် ရရှိပြီး ဧပြီ ၂၅ ရက်မှာ ပါတီမှတ်ပုံတင်ကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ချပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) IDP တွေ နေရပ်ပြန်ရေး NRPC နဲ့ KHCC သဘောတူညီမှု ထုတ်ပြန်
IDP တွေ နေရပ်ပြန်ရေး အတွက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO/KIA) နဲ့ ညှိနှိုင်းရာမှာ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ (KHCC) က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အပါအဝင် အချက် ၅ ချက်ကို သဘောတူဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန (NRPC) က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နေရပ်စွန့်ခွာရသူတွေ မူလနေရပ်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြန်အခြေချ နေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ IDP စခန်းတွေမှာ လတ်တလော လိုအပ်နေတဲ့ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီတွေ ပေးဖို့နဲ့ IDP စခန်းတွေ ပိတ်သိမ်းရေး ကိစ္စတွေကို NRPC နဲ့ KHCC အကြား ဆွေးနွေးခဲ့တာလို့ NRPC ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ အစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ KIO/KIA အကြား တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ တကြော့ပြန် နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့ စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည် IDP ၁ သိန်း နီးပါးဟာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။
သဘောတူညီချက်တွေမှာ IDP တွေ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေရပ်ပြန်ရေးနဲ့ ပြန်လည် နေရာချထားရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု မူဝါဒနဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို အခြေခံပြီး NRPC က ချမှတ်တဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ IDP တွေရဲ့ မူလ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပြန်လည် လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် KHCC က လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက် ညှိနှိုင်း လုပ်ကိုင်ပေးဖို့တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
IDP တွေ နေရပ်ပြန်ရေး အတွက် NRPC နဲ့ KHCC တို့ ညိနှိုင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီ ၂၆ ရက်က နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုဌာန (NRPC) မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ရခိုင်အမျိုးသာပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ ညီလာခံလုပ်မယ်
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ခေတ်နဲ့ အညီ ပြန်ပြင်နိုင်ဖို့ ပါတီရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ညီလာခံကို လာမယ့် မေလ ၃ဝ နဲ့ ၃၁ ရက်တွေမှာ စစ်တွေမြို့မှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ ANP ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
"အရင်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့က အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ အရင် ဖွဲ့စည်းပုံက ၂၀၁၄ တုန်းက အရင် ရခိုင်ပါတီ ၂ ခု ကို ပေါင်းစည်းပြီး ချမှတ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဒီညီလာခံမှာ ဖွဲ့စည်းပုံကို ခေတ်စနစ်နဲ့အညီ နိုင်ငံရေး မူဝါဒက အစ ပြင်ဆင်မယ်" လို့ ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ညီလာခံအတွင်း ရခိုင်ဒေသမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ၊ စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်တွေ အကူအညီပေးရေး ကိစ္စတွေကိုပါ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP အဖြစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က စတင်ပေါ်ပေါက်လာချိန်ကနေ ပါတီသက်တမ်း ၅ နှစ် အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတဲ့ ညီလာခံလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ပြောပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က မြို့နယ်အားလုံးနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းတို့ရဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးနေရာတွေမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လွှွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နေရာ အများဆုံး အနိုင်ရထားတဲ့ ပါတီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP)နဲ့ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) စတဲ့ ပါတီနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းပြီး ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရုရှားသမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး စတဲ့ ဧပြီလ ၂၇ ရက် မနက်ခင်း သိသင့်တဲ့ သတင်းတွေ